PWPP (People's World Peace Project) | SADC: Press Zimbabwe to Implement Rights Reforms
The 20-page report, "False Dawn: The Zimbabwe Power-Sharing Government’s Failure to Deliver Human Rights Improvements," highlights the transitional government’s lack of progress in rights reforms in the six months since it was created. The former ruling party, Zimbabwe Africa National Union – Patriotic Front (ZANU-PF), has demonstrated a lack of political will to effect change and wields more power than the Movement for Democratic Change (MDC), the former opposition party and now a partner in government. Police, state prosecutors, and court officials aligned to ZANU-PF conduct politically motivated prosecutions of MDC legislators and activists, and fail to ensure justice for victims of abuses or to hold perpetrators of human rights violations to account.
"Southern African leaders should stop looking at Zimbabwe through rose-colored glasses," said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. "The region’s leaders need to press Zimbabwe openly and publicly for human rights reforms to prevent the country from backsliding into state-sponsored violence and chaos."
At the summit meeting, heads of state are expected to assess Zimbabwe’s compliance with a number of rulings by the SADC Tribunal on illegal land seizures in Zimbabwe. President Jacob Zuma of South Africa, the organization’s current chairman, is also expected to brief leaders on the progress made by Zimbabwe’s power-sharing government, which has been in place since February. The government was created by a SADC-brokered September 2008 agreement, which followed a period when ZANU-PF and its allies unleashed a campaign of violence to prevent an MDC electoral win.
In its new report, Human Rights Watch urged Southern African leaders to extract concrete commitments on human rights from the government of Zimbabwe and to tie them to specific benchmarks for progress within a clear time frame. The summit meeting’s participants were also urged to raise concerns about Zimbabwe’s failure to enact basic institutional and legislative reforms that would guarantee the rule of law as well as fundamental rights for Zimbabweans.
"SADC leaders should stand with the people of Zimbabwe by calling for urgent reforms to address the country’s political and human rights crisis," said Gagnon. "Without these necessary changes, Zimbabwe’s inclusive government will continue to be built on sand."